Nahatratra An’i Shina Tampoka Ny Hetsi-panoherana Tsy Mahazatra Any Pékin Entina Hanoherana Fiaran-dàlam-by Express · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2012 10:27 GMT
Nisy hetsi-panoherana tsy mahazatra notanterahana tany afovoan-tanànan'i Beijing ny 9 Desambra 2012 hanoherana ny fananganana ny zotran-dalamby Express mampitohy an'i Shenyang sy Beijing izay mandalo amin'ny faritry ny afovoan-tanànan'ny distrikan'i Chaoyang. Na dia voaaron'ny lalàm-panorenana Sinoa aza ny fahalalana hivory, amin'ireo trangan-javatra maro dia foanan'ireo manampahefana ireo fihetsiketsehana karakarain'ny vahoaka. Tamin'ity indray mitoraka ity, anefa, toa nankatoavin'ireo manampahefana ao Beijing io fihetsiketsehana io ary voatatitra betsaka mihitsy aza ny tantarany tanatin'ny ankamaroan'ireo fitaovan'ny media. Na ny Sina Weibo, sehatra media sosialy tohanan'ny governemanta ho an'ny resadresaky ny vahoaka aza, dia namoaka “sehatra fiadian-kevitra ahitàna fotokevitra” momba io raharaha io. Manontany tena ireo mpampiasa aterineto sasany raha fambara ny fiovàn-drafitra ara-politika taorian'ny fitarihana vaovaon'ny ny Kongresy faha-18 an'ny CCP izany.
Teo amin'ny manodidina ny 300 ireo mpanohitra nanao fihetsiketsehana tany amin'ny distrikan’ Chaoyang nangataka ny fanovàna ny zotran'ilay lalamby mampitohy an'i Shenyang sy Beijing. Setrin'ny tatitra nataon'ny Minisitry ny Fiarovana Ny Tontolo Iainana [zh] izay nilaza fa 37.27% amin'ny mponina ao Beijing no nanohana, raha 24.01% kosa no nanohitra io fanamboarana làlamby express izay manapaka distrika be fonenana midadasika any amin'ny faritry ny afovoan-tanànan'i Beijing no tena nahatonga io hetsi-panoherana io. Maro ireo mponina no nilaza fa tsy nanao fanadihadiana mihitsy izy ireo ary tezitra tamin'io vokatra io.
Ito ambany ito ny dika mitovy amin'ilay lahatsary tao amin'ny sehatra fiadian-kevitra Tecent QQ [zh] mampiseho ny zava-nitranga tamin'ilay hetsi-panoherana voarindra, izay nokarakaraina niaraka tamin'ireo teny filamatra mahazatra tahaka ny, “Manohitra ny tombana diso momba ny tontolo iainana”, “Noterena hanaiky”, ary “Manohitra ny fandalovan'ny zotran-dalamby Express eo anoloan'ny varavaram-bahoaka”.
Naka ilay vaovao haingana dia haingana ny ankamaroan'ireo famoaham-baovaon'ny media mahazatra araka ny voatanisan'i Sohu74 [zh], mpampiasa Weibo :
Tanatin'ny alina iray, lasa nifantohan'ny ankamaroan'ireo fampahalalam-baovaon'ny media mahazatra ny fiarovana voalanjalanja ny zon'ireo mponina eny amin'ny làlamby mampitohy an'i Shenyang sy i Beijing. Tampoka be ilay fiovàna, tahaka ny hoe naharesy taminà lotto ianao. Tena sarotra ny maminavina sy manome valinteny. Omaly aho naheno resaka teo anivon'ireo mpitandro filaminana. Nisy mpitandro filaminana iray nanontany “Ahoana koa no mahatonga ireo manao solomaso [izany hoe ireo nahazo fanabeazana tsara fototra] nandray anjara ihany koa tao anatin'ilay fihetsiketsehana?” Nilaza tamin'ireo mpanohitra ny mpitandro filaminana iray hafa: “miangavy anareo hitandro ny filaminana, aza mibahana ny arabe raha tsy izany dia handika ny lalàna ianareo.”
Tsy zava-baovao ny fanamboamboarana ireo fanadihadiana any Shina. Ny zavatra tena nahagaga ny ankamaroan'ny vahoaka dia ny namelana ireo mponin'i Chaoyang hanao hetsi-panoherana tany afovoan-tanànan'i Beijing. Reymon, mpandinika ny fitantanam-bola dia nihiaka [zh] tao amin'ny bilaogy kirìtikany:
Any Beijing, renivohitr'i Shina, nankatoavina ny fivoriam-bahoaka hanohitra ny tetikasa Fiaran-dalamby Express. Zavatra goavana tokoa izany!
Nisarika tsikera mihoatra ny 2000 [zh] izany tsikerany fohy izany, ny sasany nampiely, ny sasany kosa niahiahy:
心安得理：Raha tena marina izany, mety afaka hanova ny antokon'ny fitondrana. Tsara izany.
亚洲陶瓷商城：”fahalalahana” no fotokevitra goavana iray ao anatin'ny Kôngresy faha-18 an'ny Antoko Kaominista Nasionaly, sa tsy izany?
帝都日记：10 Desambra. Mamiratra ny andro. Voalohany indrindra ho an'ny fanjakana. Tantara avy eny an-dàlambe: nankatoa ilay hetsi-panoherana entina manohitra ny làlamby express ny mpitandro filaminana. Araka ny fomban-drazan'ny fanjakana, misy karazany roa ireo fivoriana, ny iray dia karakarain'ny governemanta ho an'ny daholobe, ny iray hafa kosa dia karakarain'ny governemanta ho an'olona voafantina. Voarara ny fikambanana mitsangatsangana fotsiny na inona na inona toetrany. Izany no mahatonga ireo trangan-zavatra maro tsy milamina. Milaza ireo avarapianarana fa, raha lasa lamina arahana ny fivorian'olon-tsotra, ho voafetra ny fahefan'ny governemanta ary dingana iray mankany amin'ny demokrasia izany. Hisy fiantraikany goavana eo amin'ny hoavin'ny fivoaran'ny firenena izany.
渴学家：be zavatra tsara hitranga hisy setriny.
未曾顿悟已经年：manantena fa tsy halazo vetivety ny fivoarana tahaka izany.
老虎啸山林：Nangataka fihetsiketsehana hanoherana fandrodanana an-terisetra izahay dimy taona lasa izay, nefa mbola tsy nisy nekena hatramin'izao.
livelife在唱歌：Mipoitra avy any Andrefana ny masoandro.
亮中华之剑：Hetsika nataon'ny governemanta foibe amin'ny lalàm-panorenana izany. Toa vonona hanova sy hiaro ireo zo araka ny lalàm-panorenana ny governemanta.